Mitemo Yebasa | Martech Zone
Paunenge uchishandisa saiti ino, unobvuma iwe unonzwisisa edu marongero uye iwe unobvumirana nazvo.
Saiti ino haizotongwe nemhosva yezvinhu zvinogadzirwa nemushandisi uye zviitiko panzvimbo iyi.
Iwe unobvuma uye unobvuma kuti zvese zvirimo (zvinyorwa uye midhiya) pachena kana zvakavanzika zvinoparadzirwa ndiwo wega mutoro wemunhu anotumira zvirimo, kwete ino saiti.
Saiti ino inochengetera kodzero yekuwedzera, kubvisa kana kushandura chero chinhu pane ino saiti chero nguva pasina ziviso kana mutoro.
Iwe une basa rezviitiko zvako pamhepo uye zvakavanzika zvemashoko ako.
Saiti ino inochengetera kodzero yekubvisa zvemukati izvo zvinodzora vamwe vashanyi kune zvinonyadzisira, rusaruraganda, rusaruro, chisimba, ruvengo, kumhura, kana izvo zvisina kukosha zvakanyanya.
Saiti ino inochengetera kodzero yekubvisa hurukuro dzinogumbura uye dzisina kukodzera.
Spam uye yakajeka kuzvisimudzira haina kubvumidzwa pane ino saiti uye ichabviswa.
Iwe haugone kushandisa saiti ino kugovera kana kutumira zvinhu zvisiri pamutemo kana ruzivo kana kutumira kumasosi anoita izvo zviitiko.
Ndiro basa rako kutarisa chero mafaera akadhirowewa nezvehutachiona, trojans, nezvimwe.
Iwe une basa rezviito zvako uye zviitiko pane ino saiti, uye isu tinokwanisa kurambidza vashandisi vanotyora Mitemo yeSevhisi.
Iwe une basa rekuchengetedza komputa yako. Tinokurudzira kuisa yakavimbika hutachiona chirongwa chekudzivirira.
Saiti ino inoshandisa akati wandei analytics maturusi ekuongorora vashanyi uye traffic. Ruzivo urwu runoshandiswa kugadzirisa zvirimo pane saiti.
Zvese zvirimo zvinopihwa pane ino blog ndezvekudzidzisa chete. Muridzi weiyi blog haaite mamiririri maererano nekururama kana kukwana kwechero ruzivo pane ino saiti kana kuwanikwa nekutevera chero chinongedzo pane ino saiti. Muridzi haazovi nemhosva kune chero kukanganisa kana kusiiwa mune iyi ruzivo kana nekuwanikwa kweruzivo urwu. Muridzi wacho haazovi nemhosva kune chero kurasikirwa, kukuvara, kana kukuvara kubva pakuratidzwa kana kushandiswa kweruzivo urwu. Aya mazwi uye mamiriro ekushandisa anogona kuchinja chero nguva uye pasina ziviso.